स्वतन्त्रता लुटेको मास्टर डिग्री |
स्वतन्त्रता लुटेको मास्टर डिग्री
प्रकाशित मिति :2016-01-28 13:48:15
जवर्जस्ती गरिदिएको विवाहले निम्त्याउने हिंसा र परिवारको यातनाबाट जीवन गुमाएका छोरीहरूका आमा बुबालाई भन्न मन लाग्यो, छोरीको लास अगाडि राखेर आँसु झार्ने किन ?
काठमाडौं मै जन्मे हुर्किएकी मायाले आर्थिक अभाव कहिले बेर्होनु परेको थिएन । परिवारमा उनी एक्लो छोरी हुन । सबैको माया ममताभित्र जीवनका २७ वर्ष बिताइन । उनीसँगै पढेका सहपाठीहरूको विवाह भयो, बालबच्चा पनि भए । उनले भने २७ वर्षसम्म विवाह गरिनन् । त्यसपछि समाज र परिवारले अनेकन बचन लगाउन थाले । उनलाई परिवारले लगाउने पहिलो बचन,उमेर छिप्पिसक्यो यसलाई कस्ले विहे गर्छ ? तर, परिवारको गलत सोँचको उनले प्रतिकार गर्न पटकै सकिनन् ।
समाजशास्त्रमा मास्टर डिग्री गरेकी मायालाई काठमाडौंमै व्यापार गर्ने सम्पन्न परिवारको केटा माग्न आउँदा उनको मन्जुरी विना परिवारले विहे पक्का गरिदिए । पैसा पछाडि दौड्ने मायाको परिवारले विवाह एसएलसी फेल भएको केटासँग गरिदिने निधो गरेपछि उनले केटालाई भेटिन् ।
केटाले सुरूमै सर्त राख्यो विवाहपछि बुहारी र श्रीमतीको भूमिका मै सिमित हुनुपर्छ । केटाको विचारसँग उनी पटक्कै सहमत भईनन् । घरको चार दिवारभित्र सिमित हुनको लागि उनले मास्टर डिग्री गरेकी होईनन् । मास्टर सकेर व्यवसाय र समाजसेवा गर्ने उनको सपना थियो । उनको सपनासँग केटाको विचार नमिलेपछि विवाह गर्न अस्वीकार गरिन् । सबैको माया ममता पाएर २७ वर्ष बिताएकी उनले विवाह तोडेको दिनदेखि नारकीय जीवन बिताउनु पर्यो ।
बुबाआमा, दाजुभाई र आफन्तबाट दिनहुँ गाली गलौज र तिरस्कार सहनुपर्यो । घरका बोल्नै छोडे । माया गर्ने दाजुले लछार पछार पार्दै कुटपीट गरे । मानौं, उनी ठूलै अपराधी हुन् ।
दाजुले यसरी कुटिरहँदा जन्म दिएकी आमा पनि दर्शक बनिन् । उनलाई त्यो बेलामात्र थाहा भयो, अहिलेसम्म पाएको माया झुटो थियो । परिवारको तिरस्कार सहन नसकेर उनले पटक–पटक आत्महत्या गर्ने प्रयास गरिन् । रातदिन आफूमाथि हिंसा हुँदा नत प्रतिकार गर्न सकिन्, नत घर छोडेर हिड्न नै । ५ वर्षसम्म परिवारको यस्तै तिरस्कार र यातना चुपचाप सहिन् ।
समाजशास्त्रमा मास्टर डिग्री हासिल गरिसकेकी एउटी युवतीले यस्तो अन्याय सहन किन बाध्य भईन् होला ? भन्ने कुराले मलाई भित्रभित्रै पोलिरह्यो । मास्टर गर्नु भनेको कुनै पनि विषयमा विद्धता हासिल गर्नु हो । कुनै बेला हामी एउटै गैरसरकारी संस्थामा सँगै काम गरेका सहयात्री पनि थियौँ ।
त्यसबेला ख्याल ठट्टामा हाँस्दा उनको अनुहारमा हाँसो कहिल्यै देखिएन । त्यसक्रममा उनले भोगेका कतिपय कुरा सुन्दा मेरो शरीर आफैँ काँप्यो । परिवारले यस्तो पनि गर्छन् र ?? उनले परिवारबाट भोगेका यातनाका कुरा मैले त कल्पना समेत गर्न सक्दिनँ । तर, मायाले त भोगेर आएकी हुन् ।
छोराले मास्टर डिग्री गर्दा देश र समाजको सेवा गर्ने भो भनेर छाती फुलाउने आमाबाबुले किन छोरी देश र समाजको सेवा गर्ने भई भनेर भन्न नसकेको होला ? डिग्री गरिसकेकी छोरी के चाहान्छिन् भन्ने फैसला गर्ने स्वतन्त्रता छैन । उनको जीवनको हरेक फैसला समाज र परिवारले गर्नुपर्ने ? यस्तो ढोँगी समाजलाई मत मनैदेखि थुक्छु ,जहाँ मान्छे भएर बाँच्ने अधिकार छैन । मैले यस्ता धेरै परिवार भेटेको छु , जसले धन सम्पति भएको भरमा छोरीको भन्दा कम शैक्षिक योग्यता भएको केटा माग्न आउँदा केटीको मन्जुरी विना विहे गरिदिएका छन् ।
जवर्जस्ती गरिदिएको विवाहले निम्त्याउने हिंसा र परिवारको यातनाबाट जीवन गुमाएका छोरीहरूका आमाबुबालाई भन्न मन लाग्यो, छोरीको लास अगाडि राखेर आँसु झार्ने किन ? समाजलाई देखाउन ? यही देखावटी समाज र संस्कारका कारण कैयौँ दिदी बहिनीले अकालमा ज्यान गुमाएका छन् ।
जवसम्म समाज र परिवारले छोरा र छोरीको उद्देश्य समान राख्न सक्दैनन्, तबसम्म धेरै छोरीहरूले ज्यान गुमाउने छन् भने उनीहरूले गरेको मास्टर डिग्रीको अर्थ हुने छैन ।
प्रकाशित मिति २०७२ माघ १४ गते बिहीवार